खबरदार ! सिके राउतहरु जन्माउन बन्द गर ! – Tharuwan.com
राजेश विद्रोही– मधेशी जनताले पटक पटक मधेशकै नेतृत्वबाट धोका खाएर होला सिके राउत प्रकरणमा मानिसहरुले आँकलन गरेनुसार मधेश तातेन । सिके राउत र सिके राउतले बोकेका विचारहरु जब राज्यले उनलाई गिरफ्तार गर्‍यो, तब मात्र जनताले बुझ्न पाए कि सिके राउत को हो भनेर । सिके राउतको विचारसँग सिंगो मधेश सहमत होला वा नहोला, त्यो अलग्गै कुरा हो । तर यहाँ सवाल नेपालमा सिके राउत प्रकरण किन घटित भयो भन्ने हो ।
सिके राउत हाम्रै राज्यव्यवस्था वा यहाँको शासन व्यवस्थाले जन्माएको हो कि कतैबाट आयातित हो ? यो सवाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल हो । मुलुकको हरेक व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति भए गरिएका सबै आन्दोलन, संघर्ष वा युद्धमा मधेशले बलिदानको कोटा चुक्ता गरेको छ । त्याग, तपस्या र बलिदानका उच्च कीर्तिमानहरु कायम गरेको छ । तर आजपर्यन्त मधेश किन पहाडीया खस अहंकारवादको जाँतोमा पिल्सिरहेको छ ? किन आज आफ्नै मुलुकभित्र औपनिवेशीकरणको चपेटामा छ ? राज्यले मधेशीहरुलाई किन नेपाली भएर पहाडी र यहाँका शासक जातिहरुकै हैसियतमा बाँच्ने अवसर दिंदैन ?
मधेशमाथिको क्षेत्रीय, भाषिक तथा साँस्कृतिक उत्पीडनको मात्रा कति छ ? के यहाँका पहाडीया खस अहंकारवादी शासकहरुलाई थाहा छ ?नेपाली भएर पनि आज ‘नेपालीको हैसियतमा’ बाँच्न नपाउनुको पीडाबोध हरेक मधेशीहरुमा व्याप्त छ । काठमाडौंले इन्डियन देख्ने, दिल्लीले नेपाली देख्ने हामी मधेशीको पहिचान के हो ? नेपाली हो कि होइन ? राज्यले यसको जवाफ दिनु पर्दछ । आफ्नै देशभित्र दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नुको पीडा कति हुन्छ ? त्यो बाँच्नेलाई थाहा हुन्छ ।
मधेशीले नेपालमा आफ्नो आत्मसम्मान, स्वाभीमान र पहिचान पाउँदैनन् भन्ने त्यसका लागि अलग्गै राष्ट्रको माग गर्नु के अपराध गर्नु हो ? संघीयता माओवादी जनयुद्धले गर्भमा हुर्काएको र मधेश आन्दोलनले जन्माएको एजेण्डा हो । संघीयताले मधेशीको वास्तविक पहिचानलाई स्थापित गर्छ । हो, यही विश्वास बोकेर आम मधेशी जनता धैर्यताको अन्तिम सीमामा छन् ।
अन्तरिम संविधानले दिशाबोध गरेको र विगतको युद्ध र आन्दोलनले जनादेश दिएको यो मुद्दामाथि आज ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरुले किन खेलाँची गरिरहेका छन् ?फेरि पनि किन महेन्द्रवादी केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्था जबर्जस्त लाद्न खोजिदैछ ? संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा जब यस्ता षड्यन्त्रहरुले खुल्लेआम नाङ्गो नाच नाच्न थाल्दछन्, त्यस्तो अवस्थामा एउटा सिके राउत मात्रै होइन, हजारौं सिके राउतहरुले जन्म लिन सक्छन् ।
आफ्नो स्वाभीमान, आत्मसम्मान र पहिचानका लागि यातनाका दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै होइन, आवश्यक परे मधेशीहरु बलिदानका निम्ति पनि तयार हुन्छन् । व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्दैमा, उसलाई यातना दिँदैमा या उसको नृशंस हत्या गर्दैमा उसको विचार मर्दैन । राज्यले जुन विचारलाई जति दमन गरेर निस्तेज पार्न खोज्दछ, त्यो विचार त्यति नै विष्फोटक बनेर मुखरित हुन्छ । इतिहासका कैयौं दृष्टान्तले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । तसर्थ, राज्यलाई भन्नै पर्दछ, खबरदार ! सिके राउतहरु जन्माउन बन्द गर । त्यसका लागि संविधानमा मधेश र मधेशीका अधिकारहरुलाई पर्याप्त ठाउँ देऊ र त्यसलाई संस्थागत गर । मधेश र मधेशीको नाममा मुठ्ठिभर मधेशी नेतालाई शासनसत्तामा पु¥याउँदैमा मधेश र मधेशी जनताको मुक्ति हुँदैन ।
सिंगो समुदाय अधिकार सम्पन्न हुने गरी संविधान निर्माण गर्ने सोच शासकवर्गमा जन्मे मात्र सिके राउत र उनले बोकेजस्तो पृथकतावादी विचारलाई रोक्न सकिन्छ । यदि यो संवेदनशील विषयलाई नजरअन्दाज गरियो भने हजारौं मधेशी युवाहरु सिके राउत बन्न बाध्य हुनेछन् । शासकवर्गले सत्ता र शक्तिको अहंकारमा मधेश र मधेशी जनतामाथि बर्षौदेखिको विभेदकारी र उत्पीडनकारी सोचलाई कायम राख्न खोजे त्यो उनीहरुको नै विनाशको कारण बन्ने निश्चित छ । ‘फुटाऊ र राज गर’ शासकहरुले सँधै यही नीति लिंदै आएका छन् ।
आज मधेशका मुद्दा लिएर राजनीति गर्ने व्यक्ति र पार्टीहरुबीचमा पनि एकता छैन । एकीकृत र केन्द्रीकृत रुपमा मधेशमा शक्ति जन्मन नसक्नुको कारण हो, उनीहरुको निहित तुच्छ स्वार्थ । मधेश र मधेशी जनतामाथिको उत्पीडनलाई भजाउँदै राज्यसँग वार्गेनिङ गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने । त्यसैकारण उनीहरु टुट फुट र विभाजन भएर स-साना दुकान थापेर राजनीतिको व्यवसाय चलाइरहेका छन् । जसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । यस हिसाबले भन्ने हो भने मधेश उत्पीडनबाट मुक्तिको लागि यी मधेशी दलाल नेताहरु नै प्रमुख रुपले बाधक रहँदै आएका छन् । जसले मधेश र मधेशी जनतालाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको खेलौना बनाइरहेका छन् । यस्ता पार्टी र नेताहरुलाई पनि यस घडीमा खबरदारी गर्नेपर्छ कि निहित स्वार्थका लागि मधेश र मधेशी मुक्तिका एजेण्डासँग कुनै पनि हालतमा सौदाबाजी नगर । गर्‍यौ भने तिमीहरुको प्रवृत्तिलाई मधेशी जनताले बेलैमा चिनिसकेका छन् र सबक सिकाइसकेका पनि छन्, त्यसो भएको खण्डमा मधेशमै तिमीहरुको लागि प्रवेश निषेध हुन सक्छ ।
जनताले दिएको झापडबाट उनीहरुको होश फिरेको छ कि छैन त्यो हेर्न भने केही दिन कुर्नु पर्ने नै भएको छ । वास्तवमा मधेश र मधेशी जनताले नेपालबाट अलग हुने र छुट्टै देश बनाउने कल्पना नै गरेका छैनन् । गर्ने कुरा पनि होइन । तर ‘मरता तो क्या नइ करता’ भने झै बर्षोदेखि लादिएको उत्पीडन, विभेदलाई परिवर्तित सन्दर्भमा पनि कायम राख्ने षड्यन्त्र गरिन्छ भने वाध्य भएर यस्ता आवाजहरु उठ्ने गर्दछन् । यसर्थमा सिके राउतहरु जन्मनु विल्कूल स्वभाविक हो ।
ऐतिहासिक रुपले आवश्यक पनि । हामी सबैको घर घरमा टुक्रे चिन्तन छ । एउटै बुवा आमाका सन्तानहरु एकै परिवारमा मिलेर बस्न सक्दैनन् । विवाह गरेपछि, छोराछोरी भएपछि उनीहरु पैत्रिक सम्पत्तिको भागवण्डा लगाउँछन् र आ–आफ्नो नयाँ परिवार बसाउँछन् । पैत्रिक सम्पत्तिमाथि सन्तानको हक हुन्छ र मागेर नपाए उसले प्रचलित कानूनको साहरा लिएर लडेर भएपनि लिन्छ । यदि पैत्रिक सम्पत्तिमाथि सन्तानको हकलाई कानुनले संस्थागत नगरेको हुन्थ्यो भने आज हरेक घरपरिवारमा मारामारको स्थिति हुने थियो । र, परिवार, समाज नै चल्न सक्ने स्थितिमा हुने थिएन । हो, ठीक त्यसैगरी यदि मधेश र मधेसी जनतालाई पनि नेपालको ‘मूलधार’मा समाहित नगर्ने र विभेद÷उत्पीडनलाई कायम राख्ने वा सौताको व्यवहार गरिराख्ने हो भने त्यहाँ पनि मारामार र तनावै तनावको स्थिति पैदा हुन्छ ।
यसको अर्थ यही हो कि अधिकार नदिएमा देश टुक्रन सक्छ, अधिकार दिएर देश कहिल्यै पनि टुक्रिदैन । शासकहरुले यो कुरालाई बेलैमा गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ ।
कञ्चनपुरमा पित्तर असराई र सखिया नाच (फोटो फिचर)
5 thoughts on “खबरदार ! सिके राउतहरु जन्माउन बन्द गर !”
Jaba samma pahadiya ekalbadi jatiya ahankar yes Nepal rajya ma rahala taba samma yesta ck, dk, pk, mk, hk continue janmadai janne xa, yo deshko bikash, sambridhi ra bhaichara ko badhak vanekai pahadiya ekalbadi ahankar ho. yo pahadiya ahangkar nastha hudaina vane desh voli somaliya jastai nahola vanna sakinna. Bikash ra bhaichara ko badhak pahadiya ekalbad.
बिचार एकदम सही छ । मार्मिक छ यथार्थपरक छ ।
Ck go2India and speak Hindi.
jaba samma nepal ma madhesi haru le atma-samman sahit ko pahichan paudainan taba samma CK RAUT haru nepal ma janmi rahanchan
Aakdum sahi kura ho. Yo Pahadi ahankari harulai thik parnunai parchha. Aakdum ramro kura lekheko chha. Ramrokura ko support garnu parchha. Afno right mageko CK Raut lai deshdrohi ko sangya diyera manchhelai bhadkauna khojeko chha sarkarle. Tara yo bichar mardaina.